बदाम र मह सँगै खाँदा स्वास्थ्यमा हुने ६ फाइदा, अपनाउनुपर्ने सावधानी | Ratopati
बदाम र मह सँगै खाँदा स्वास्थ्यमा हुने ६ फाइदा, अपनाउनुपर्ने सावधानी
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeअसोज ५, २०७८ chat_bubble_outline0
बदाम स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी छ । यस्तै कुनै मिसावट नभएको मह अमृतभन्दा कम हुँदैन । यी दुवै मिसाएर खाँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
बदाममा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, फाइबर, क्याल्सियम, आइरन, म्याग्नेसियम, फस्फोरस, पोटासियम, जिङ्क, भिटामिन सी, सोडियम, कपर जस्ता पोषक तत्त्व पाइन्छ । यस्तै महमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, ऊर्जा, पानी, फस्फोरस, म्याग्नेसियम, आइरन, क्याल्सियम, पोटासियम, सोडियम, जिङ्क, भिटामिन बी–सिक्स, भिटामिन–ई जस्ता पोषक तत्त्व पाइन्छ । यदि तपाईं महमा बदाम मिसाएर खानुभयो भने स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी हुनेछ ।
यस विषयमा भारतको एउटा सञ्चार माध्यमले पोषणविद् तथा वेलनेस एक्सपर्ट वरुण कत्यालसँग कुराकानी गरेको छ ।
१. हड्डीका लागि उपयोगीः
मह र बदाम सँगै सेवन गरियो भने हड्डीले प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम र म्याग्नेसियम पाउँछ । क्याल्सियम र म्याग्नेसियमले हड्डीलाई बलियो बनाउने र अस्टियोपोरोसिस जस्तो हड्डीको रोग र भाँच्चिने खतरा कम गर्न उपयोगी हुन्छ । तसर्थ कमजोर हड्डी भएकाहरूले बदाम र मह मिसाएर खाँदा धेरै फाइदा हुन्छ ।
२. शरीरमा ऊर्जा बढाउँछः
बदाम र महमा प्रोटिन, फाइबर र फ्याटी तत्त्व पाइन्छ । त्सैले यसको सेवनले प्रशस्त ऊर्जा पाउन सकिन्छ । नियमित रूपमा मह र बदाम खाएमा आलस्य र थकानबाट मुक्त भई शरीर ऊर्जावान् बन्छ ।
३. तौल कम गर्न उपयोगीः
तौल कम गर्नका लागि मानिसहरू निकै कसरत गर्छन् तर त्यसबाट केही फाइदा नभएपछि दुःखी हुन्छन् । तौल कम गर्न बदाम र मह निकै उपयोगी हुन्छन् । मह र बदाम मिसाएर नियमित सेवन गर्नाले तौल कम गर्ने र मेटाबोलिक सिन्ड्रोमबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ । यद्यपि यसका लागि केही योग र सन्तुलित भोजन आवश्यक पर्छ ।
४. पाचन क्रिया तन्दरुस्तः
मह र बदाममा फाइबर पाइन्छ; जसले पाचन क्रियालाई उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गर्छ । यसले आन्द्रामा हुने राम्रो ब्याक्टेरियाको गतिविधिमा पनि सुधार ल्याउँछ । यस्तोमा कसैले बदाम र महको सेवन गर्दा पाचन प्रक्रिया राम्रो हुन्छ । सम्झनयोग्य कुरा के छ भने बदाम र मह सेवनले शरीरभित्रको विषाक्त पदार्थ निकाल्न निकै सहयोग गर्छ ।
५. कपालका लागि उपयोगीः
कपाललाई राम्रो बनाउन बदाम र महको सम्मिश्रण निकै उपयोगी छ । किनभने प्रोटिन र भिटामिनले कपाललाई राम्रो बनाउन सक्छ । बदाम र मह मिसाएर खानाले कपाल राम्रोसँग बढ्नुका साथै यो बलियो र मुलायम हुन्छ । कसैको कपाल झर्ने समस्या छ वा कपाल पातलो छ भने बदाम र महको नियमित सेवनले यो समस्या हट्नसक्छ ।
६. छालाका लागि पनि राम्रोः
बदाम र महको मिश्रण अनुहारका लागि निकै उपयोगी हुन्छ । यसैगरी यसको सेवनले छालामा निखार आउँछ र छालासम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । रुखो छाला, एक्जिमा र सोरायसिसजस्ता समस्याबाट ग्रसित व्यक्तिहरुले बदाम र मह नियमित सेवन गरेमा यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्छन् । मह र बदामबाट बनेको पेस्टले छालाका विभिन्न समस्यालाई टाढै राख्छ ।
बदाम र मह खाँदा हुने हानि र अपनाउनुपर्ने सावधानीः
बदाम र महको सेवन आवश्यकताभन्दा बढी गरियो भने स्वास्थ्यलाई हानि गर्नसक्छ । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔँः
–बदाम र महमा प्रशस्त फाइबर हुन्छ । शरीरमा फाइबर बढ्दा पेटको समस्या आउन सक्छ ।
– बदाम र महको सेवनले व्यक्तिलाई एलर्जी पनि हुनसक्छ । यस्तो भएको खण्डमा तुरुन्त सेवन बन्द गर्नुपर्छ ।
– बदाम र महलाई आफ्नो डाइटमा समावेश गर्नुअघि कति मात्रामा खाने हो, जानकारी लिनुहोस् ।
– गर्भवतीले मह र बदामको सेवन गर्नुअघि विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ ।
– बालबालिकाको डाइट पनि मह र बदाम समावेश गर्नुअघि विज्ञको सल्लाह लिनुहोस् ।
– मधुमेहद्वारा पीडित व्यक्तिले पनि मह र बदाम समावेश गर्नुअघि विशेषज्ञको सल्लाह लिनुहोस् ।
– बदामले गर्मी गराउँछ । यस्तोमा दिनमा एक पटक मात्रै यसको सेवन सीमित मात्रामा गर्नुहोस् ।
खसी, राँगा किन्दै हुनुहुन्छ ? निरोगी यसरी चिन्नुहोस् !
दसैँमा घरमै बनाउने होइन त ककटेल र मकटेल ? (भिडियो)
पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण छ किवी, प्रतिरोधी क्षमतादेखि रक्तचापमा पनि असाध्यै फाइदा
मधुमेहका रोगीलाई फाइदाजनक हुन्छ अनार
दसैँ खान्की : मासुलाई ट्वीस्ट दिएर यसरी बनाउनुहोस् मिठा परिकार (भिडियो)
साम्राज्ञीको गीतमा १ लाख पुरस्कार
टेक्निकल सेन्टर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग रहन्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति
प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल बारको १५ दिने अल्टिमेटम
रातोपाटी ब्रिफिङ : महाधिवेशनको मुखमा एमालेमा विवाद, चोलेन्द्रलाई थपिँदै तनाव
एमालेमा भाँडभैलो : प्रभुलाई फकाउने, रावललाई चिढ्याउने ओलीको नीति
भीम रावलको फरक मतको पूर्णपाठ : ओलीका कारण पार्टीमा अविश्वास बढ्यो !
हिमानीको कार्यक्रममा कलाकारको लर्को
लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्षमा प्रकाशराज शर्मा निर्वाचित